मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २३ माघ २०७५)
हाल रू. ५० करोड चुक्तापूँजी रहेको यस विकास बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ४ करोड ३८ लाख नाफा कमाएको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चानल मुनाफा बढेपछि नाफा बढेको हो । बैंकको खर्चभन्दा आम्दानी बढेकाले यसको प्रभाव नाफामा परेको हो । बैंकले गत आवको मुनाफाबाट शेयरनीहरूलाई १७ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि र आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि शेयरधनीले उक्त लाभांश पाउनेछन् । बैंकले अघिल्लो वर्ष ३१ दशमलव ४८ प्रतिशत बोनस र १ दशमलव ६६ प्रतिशत नगद लाभांश शेयर वितरण गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीले गतवर्ष भने बोनस शेयर घटाएको छ ।
2019-02-06 - 148 view(s) - abhiyan